WARAR CUSUB: Waa kuwee laacibiinta ay doonayaan kooxaha waawayn ee Yurub? (Goos Goos xiise badan) | Gool FM	Thursday, February 11th, 2016	Home
WARAR CUSUB: Waa kuwee laacibiinta ay doonayaan kooxaha waawayn ee Yurub? (Goos Goos xiise badan)
Published on December 12, 2012 by Maxamed Xaaji
(Zurich) 12 Dis 2012 Aqristayaasheena sharafta mudan waxaanu halkan ugu haynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga iyo laacibiinta lakala doonayo wararkii ugu dambeeyay.
Inter oo wada xiiseyneysa Fernando iyo Rolando
Inter ayaa isha la raacaysa kaydka qaaliga ah ee kooxda FC Porto, iyadoo bartilmaameedsanaysa Fernando iyo Rolando oo laga yaabo inay kooxda Nerazzurri ay dalab rasmi ah u dirto bisha Janaayo.
Inter oo qorsheeyneysa inay qalqaalo u gasho Lewandowski
Xidigan caalamiga ah ee Polish-ka ah oo weerarka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ayay Inter doonaysaa inay ka dhigto ninkii mudada dheer dhaxli lahaa qanaaskeeda qawaarka ah ee Diego Milito oo haatan u muuqda bil sii dhacaysa waloow Inter ay cadaadis kala kulmayso kooxo ay ugu horeeyso Man Utd oo laacibka mudaba cayrinaysay.
Isha: Corriere dello Sport
Tottenham oo qooraansanaysa Sneijder si uu ugu bedelo Van der Vaart
Kooxdan ka ciyaarta woqooyiga London ayaa dareensan in Wesley Sneijder uu bidaal rasmi ah u noqon karo Rafael van der Vaart, kaasoo Spurs ka aaday kooxda Hamburg xagaagii tegey. Tottenham ayaan ilaa haatan haysanin kubad qaabeeye khadka dhexe ciyaarta ka dhisa tan iyo markii uu Luka Modric ku biiray kooxda Real Madrid bishii August.
Peluso, Armero ama Kolarov oo ay Juve u dooneyso inay u bedelaan Asamoah
Kooxda Bianconeri ayaa dooneysa laacib ka ciyaara dadabka bidix ee daafaca maadaama uu laacibkooda Kwadwo Asamoah uu ka qayb qaadan doono koobka qaramada Africa ee Africa Cup of Nations, iyadoo midkood doonaysa sedexda daafac ee Peluso, Armero iyo Kolarov oo ilaa iyo haatan soo galay raadeerka Juve.
Barcelona oo David Villa ugu yaboohday qandaraas cusub
Iyadoo ay dhowaanahanba socdeen warar la isla dhexmarayo oo tibaaxayay inuu laacibkani ka socdo kooxda Catalan-ka ah, balse Blaugrana ayaa haatan ku tallamaysa inay laacibkan usoo bandhigto qandaraas cusub oo sanad ah oo uu laacibkan caalamiga ah ee Spanish-ka ah uu kusii joogi doono gegada Camp Nou tan iyo xagaaga 2014.
Juventus oo Osvaldo u aragta nin ay uga maarmi karto Drogba
Juventus ayaa ku riyoonaysa Drogba balse waxay sidoo kale indha indheeynayaan qanaaska Roma ee Pablo Osvaldo oo dhaqaale ahaan Juve u roon marka ay timaaddo gunooyinka cirka ku shareeran ee uu dalbanayo Drogba.
Sida uu qorayo warsidaha La Gazzetta dello Sport waxay Juventus marka hore isku dayi doontaa inay la xaajooto Drogba bisha Janaayo balse hadii ay taasi socon waydo way usii caddahay halkii ay cagta dhigi lahayd taasoo ah Roma.
Manchester City oo bartilmaameedsanaysa Benat
Kooxda haysata horyaalka Premier League ayaa xiisaynaysa laacibka khadka dhexe ee ka ciyaara gobolka Basque ee dalka Spain oo ay ka dhisan tahay kooxda Real Betis, kaasoo lagu qiimeeyo ilaa €20 milyan oo euro. Benat ayaan ilaa iyo iminka aan wax qandaraas ah u kordhinin kooxdiisa.
Besiktas oo qarka u saaran Nene
Naadiga Turkish-ka ah ayaa ku madax adeeygaya inuu Nene kusoo biiriyo magaalada taariikhiga ah ee Istanbul, iyadoo ay durba bilowdeen wada xaajoodyadii u dhexeeyay Paris Saint-Germain iyo saraakiisha kooxdaasi oo meel wanaagsan maraya.
Isha: Lig TV
Dortmunds oo doonaysa Arkadiusz Milik
Naadigan Jarmanka ah ayaa xiisaynaya qanaaska Polish-ka ah oo ay horay dhowr mar iskugu dayday. Waxayna kooxdan oo wiilkan aad ula dhacsan ciyaar ahaan ay doonaysaa inay sidaa kaga dhigto laacibkii 4-aad ee Polish ah oo ay kusoo darto safkeeda xagaaga soo aadan.
Wararka	“Ronaldinho iyo David Beckham ayaan ka fiirsaday sida loo tuuro laadadka xorta ah” – Willian!
(London) 11 Feb 2016 Laacibka qadka dhexe ee kooxda ...	Ivan Rakitic oo ka hadlay isbarbardhiga Enrique iyo Pep Guardiola!
(Barcelona) 11 Feb 2016 Laacibka qadka dhexe ee kooxda ...	Arsenal oo mushaar qaali ah faraqa ugu shubaysa Alexis Sanchez si uu u sii joogo kooxda!
(London) 11 Feb 2016 Kooxda Arsenal ayaa la soo ...	Juan Mata oo looga gacan haatinayo horyaalka talyaaniga (Kooxdee doonaysa?)!
(Manchester) 11 Feb 2016 Kubadd abuuraha kooxda Man United ...	“In sanad walba aad timaado Final-ka Copa del Rey waa wax adag” – Luis Enrique!
(Barcelona) 11 Feb 2016 Tababaraha kooxda Barcelona Luis Enrique ayaa ...	Liverpool oo raali galisay taageerayaasheeda isla markaana dib uga laabatay go’aankii hore!
(Liverpool) 11 Feb 2016 Maamulka sare ee kooxda Liverpool ...	DAAWO: Jamaahiirta Man United oo dood wadaag ka yeeshay in Jose Mourinho yahay shaqsiga ku haboon kooxda iyo in kale…..
(Manchester) 11 Feb 2016. Kooxda Full Time Devils ...	Neymar oo ka jawaabay hadalkii lagu soo eedeeyay ee ahaa “Hala Madrid” (Muxuu yiri?)
(Barcelona) 11 Feb 2016 Laacibka kooxda Barcelona ee Neymar ...	Mourinho oo labadaan laacib ka diri doona Man United haddii uu la wareego shaqada kooxda!
(Manchester) 11 Feb 2016 Tababaraha la filayo inuu la ...	Chelsea oo badalka kabtan Terry ka raadinaysa horyaalka Spain!
(London) 11 Feb 2016 Kooxda Chelsea ayaa durbadiiba bilowday ...	GoolFM Mobile (USA)	About usContactsWaxaan NahayNagala Soo Xiriir	Copyright © Gool FM 2016. All Rights Reserved. Hosted By Afro